News - dhiirigelin la bilaabay si kor loogu qaado iibka gawaarida si loo kabo saamaynta COVID-19′s ee suuqa baabuurta maxalliga ah.
bilaabay dhiirigelin si kor loogu qaado iibka gawaarida si loo kabo saamaynta COVID-19 ee suuqa baabuurta maxalliga ah.
Shanghai (Gasgoo) - Yiwu, oo loo aqoonsan yahay inay tahay suuqa ugu yar ee badeecadaha adduunka, ayaa bilaabay dhiirigelin si kor loogu qaado iibka baabuurta si loo dheellitiro saamaynta COVID-19 ee suuqa baabuurta maxalliga ah.
Baabuur ka qaalisan ayaa qiimo leh, lacag ka badan iibsade ayaa heli doonta. Macaamiisha iibsata gawaarida ka hooseeya RMB10,000 (oo ay ku jiraan VAT) waxaa la siin doonaa kab kab ah RMB3,000 gaari kasta. Kabid u dhiganta RMB5,000 waxay khuseysaa baabuur qiimahiisu yahay RMB100,000 ama inta udhaxeysa RMB100,000 iyo 300,000. Intaa waxaa sii dheer, dhiirrigelinta cutubka ayaa loo labanlaabmi doonaa RMB10,000 alaabooyinka qiimahoodu ku fadhiyo RMB300,000 ama inta u dhexeysa RMB300,000 iyo 500,000, iyo RMB20,000 loogu talagalay kuwa lagu qiimeeyo ama ka sarreeya RMB500,000.
Dawladdu waxay soo saari doontaa liistada cad ee shirkadaha iibiya baabuurta maxalliga ah. Muddada ay shaqeyneyso siyaasaddu waxay socon doontaa laga bilaabo soo saarista liiska cad illaa Juun 30, 2020.
Macaamiisha shakhsiyaadka ama shirkadaha ka iibsada gawaarida cusub iibiyaasha ku qoran liistada cad ee kor ku xusan isla markaana bixiya canshuurta gadashada baabuurta ee Yiwu waxay dhalin karaan kabista ka dib markii codsiyadooda ay ansixiyaan hay'adaha ay khuseyso.
Marka laga soo tago xogta dhicitaanka, dowladda ayaa sidoo kale xad u yeeleysa tirada gawaarida khuseysa sasabashada. Qoondo ka kooban 10,000 oo cutub ayaa marka hore la bilaabi doonaa taas oo ku kallifaysa macaamiisha inay iibsadaan baabuurta sida ugu dhakhsaha badan.
Iibinta gawaarida ee Shiinaha ayaa kor u kacday 4.4% sanadkii ilaa sanadkii 2.07 milyan oo cutub bishii Abriil, laakiin iibka PV ayaa wali hoos u dhacay 2.6%, sida laga soo xigtay Ururka Shiinaha ee Soosaarayaasha Baabuurta (CAAM). Waxaa laga yaabaa inay muujiso in baahida loo qabo isticmaalka gawaarida gaarka loo leeyahay loo baahan yahay in la sii daayo lana xoojiyo.
Si dib loogu soo nooleeyo iibka baabuurta ee ay ku dhacday faafitaanka coronavirus, magaalooyin badan oo Shiinaha ka mid ah ayaa bilaabay tallaabooyin kala duwan, kuwaas oo ka mid ah bixinta kaabayaashu ay yihiin kuwa ugu badan ee la korsaday. Yiwu ma aha kii ugu horreeyay, runtiina ma noqon doono kan ugu dambeeya.